Mgbatị - Bezzia | Bezzia
Mgbatị ahụ bụ ihe dị mma maka ahụ anyị ma na-emekwa ka anyị maa mma. Ebe ọ bụ na anyị ga-achọ ilekọta ahụ anyị na ọdịdị anyị, isiokwu a dị mkpa mgbe ị na-ede akwụkwọ akụkọ ụmụ nwanyị. Na Bezzia, anyị ga-emeso ndị ahụ mmega ahụ dị ka ihe dị mkpa na ihe mgbaru ọsọ anyị nke ilekọta onwe anyị.
Na mgbakwunye na igosi gị ohere dị iche iche maka na-emega ahụ, anyị ga-egosi gị otu esi eme ya nke ọma, uwe ma ọ bụ ihe ndị dị mkpa iji mee ya na ihe ndị ọzọ nwere ike ibilite. Na mgbakwunye, anyị ga-ekwusi ike mkpa ọ dị ịme mmega ahụ dịkwa mma, ebe ọ bụ na nke a ga-emetụta nkwụsi ike na usoro anyị ji eme ya.
Anyị na-akpọ gị òkù ka ị banye n’ụwa a na-atọ ụtọ.
Tricep dips: Otu esi eme ha nke ọma na uru ha
Ihe ọ bụla na-eme mgbatị ahụ bụ nhọrọ dị mma mgbe niile. N'ihi na anyị maara na ya, ahụ anyị ga-anọgide ...
Ọzụzụ ịdị arọ: Uru na otu esi eme ya nke ọma
Ọzụzụ ịdị arọ dị mkpa ma kwesị ịbụ akụkụ nke usoro anyị na-eme kwa ụbọchị. N'ihi na…
A maara nke ọma na ọ dị ezigbo mkpa ikpo ọkụ na ịgbatị mgbe ị na-eme egwuregwu, mana n'eziokwu, ị na-eme ya mgbe niile ...
Bulgarian squats na uru ha
Enwere ọtụtụ mmega ahụ anyị nwere ike itinye na mmemme anyị kwa ụbọchị. Ma otu n'ime ndị na-adịghị ...
Ihe mmega ahụ kacha mma iji felata na ụda apata ụkwụ gị
por Nke Torres eme 3 izu .
Toning apata ụkwụ bụ ikekwe akụkụ kachasị sie ike na usoro mgbanwe anụ ahụ. Gbaa abụba ọkụ site na…
Jiri mmega ahụ ndị a bụ isi mee ka ọnọdụ ahụ gị dịkwuo mma
Taa ọtụtụ n'ime ndị bi na ya nwere nsogbu azụ. Yabụ, ịkwalite ọnọdụ ahụ bụ ihe…
Kedu ka ị ga-esi kpalie onwe gị ịga mgbatị ahụ? Atụmatụ ndị bụ isi
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpali onwe gị ịga mgbatị ahụ, anyị achịkọtala usoro ndụmọdụ ị kwesịrị iburu n'uche. N'ihi na…
Kedu ka ahụ si agbanwe mgbe ịmalite mgbatị ahụ?
por Nke Torres eme 1 ọnwa .
Mmega ahụ bara ezigbo uru maka ahụ n'ozuzu, na ọkwa niile. Ozugbo ị malitere ime...
Nku bat: otu esi eji mmemme ndị a kwuo nke ọma
Ọ bụ ezie na maka akụkụ ọ bụla nke ahụ anyị, a na-enwe usoro mmega ahụ mgbe niile karịa nke zuru oke…
Mmega ahụ dị mfe iji felata n'ụlọ
Ịkwụsị ibu n'ụlọ, na-enweghị ịga mgbatị ahụ, bụkwa nnukwu nhọrọ ọzọ. Karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọghị inwe ...
Dị irè na-agbatị maka ụbọchị ọ bụla
por Susana godoy eme Ọnwa 2 .
Ị maara nke ọma na usoro ọzụzụ bụ mgbe niile otu n'ime ihe kacha mma maka ahụike anyị, ọ bụghị naanị anụ ahụ ...